« Guichet unique »-Fitsarana Anosy : fanafainganana ny asan’ny fitsarana sy mampidi-bola | NewsMada
« Guichet unique »-Fitsarana Anosy : fanafainganana ny asan’ny fitsarana sy mampidi-bola
Par Taratra sur 16/06/2016
Notokanana, omaly, ny birao iombonana na “guichet unique” toerana tokana hahafahan’ireo manan-draharaha rehetra ao amin’ny fitsarana Anosy mandoa ireo karazan-ketra aloa eny amin’ny fitsarana.
Marihina fa nampiditra vola hatrany amin’ny 280 tapitrisa Ar tao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana ny fitsarana ambaratonga voalohany, ady madio, ny taona 2015. Nahatratra 7.000 ireo antontan-taratasin’ady tamin’izany. Tanjona ny hisian’ny mangarahara sy ny ady amin’ny kolikoly izay mampitaraina ny olona manan-draharaha eny amin’ny fitsarana hatramin’izay.
Tafiditra ao anatin’ny asa mitaky vokatra maika atao anatin’ny 100 andro izao fahavitan’ny “guichet unique ” izao, indrindra hanafainganana ny asa na ny raharaham-pitsarana, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny mpirakidraharaha, Rtoa Herinatrehina Inham Ella. Teo aloha manodidina ny 400 isan-kerinandro ny antontan-taratasin’ady mivezivezy eo amin’ny fitsarana sy ny sampandraharahan’ny hetra. Maharitra telovolana ka hatramin’ny enim-bolana vao mivoaka ny dika mitovin’ny didim-pitsarana ho an’ireo olona notsaraina teo aloha. “Vita ao anatin’ny 15 andro izany ankehitriny amin’izao fametrahana birao iombonana manara-penitra izao”, hoy ihany Rtoa lehiben’ny mpirakidraharaha.
Tanjon’ny fitsarana ny fanatonana ny vahoaka, manao asa tsy mitarazoka ary miasa ao anatin’ny mangarahara. Manomboka izao, hotsarain’ny vahoaka ireo lokaloka napetraka ireo. Nitokana izany toerana izany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, nilaza fa fitsarana atokisan’ny vahoaka, mamaly ny hetahetan’ny vahoaka ary tsy miandany no tena andrasana ankehitriny.
Anisan’ny antoka iray mametraka ny tany ho tan-dalàna ny fitsarana hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Mametraka ny fahefam-panjakana ihany koa ny fitsarana ka manana ny toerany eto amin’ny firenena ary tokony hanandratra izany lenta izany hatrany.